ရာဇကုမာရ်ပုံပြင် - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on March 26, 2012 at 11:01am
မောင်ငယ်၊ ညီမ ငယ်ငယ်လေးတို့ ရေ . . . ဟိုး ရှေးရှေးတုန်းက ပုဂံပြည်မှာ မြစေတီ ဆိုတဲ့ ဘုရားတစ်ဆူ ရှိခဲ့တယ်။ ထိုဘုရားရဲ့တံတိုင်း အတွင်းမှာ လေးထောင့် ကျောက်စာတိုင် တစ်ခု ရှိသတဲ့။
အဲဒီ ကျောက်စာတိုင်လေးဟာ ပါဠိ၊ ပျူ၊ မွန်၊ မြန်မာဘာသာလေးမျိုးနဲ့ ရေးထိုးထားသတဲ့ကွယ်။
ထိုကျောက်စာ တိုင်လေးကို မြစေတီ ဘုရားကို အစွဲပြုပြီး မြစေတီ ကျောက်စာလို့
ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ မြစေတီ ကျောက်စာတိုင် ထဲမှာ ခမည်းတော် ကျန်စစ်သား မင်းကြီးနဲ့ ရာဇကုမာရ်မင်း သားလေးရဲ့ အကြောင်းတွေ ရေးသားထား သတဲ့ကွယ်။ ကလေးတို့ သေသေချာချာ နားထောင်ကြနော်။
ကျန်စစ်သား မင်းကြီးမှာ ဦးဆောက်ပန်းလို့ အမည်ရှိတဲ့ မိဖုရား တစ်ပါး ရှိခဲ့သတဲ့။ ဘုရင်ကြီးဟာ သူ့ရဲ့ ဦးဆောက်ပန်း မိဖုရားကို အလွန် မြတ်နိုးတော်မူတာကြောင့် ကျွန်ရွာ သုံးရွာကို ပေးသနားတော် မူခဲ့တယ်။ အဲဒီ မိဖုရားမှာ သားတော်လေး တစ်ပါး ဖွားမြင်တော် မူခဲ့တယ်။ သူရဲ့ နာမည်က ရာဇကုမာရ် မင်းသားလေးတဲ့ ကလေးတို့ရေ . . .
မိဖုရားနဲ့ သားတော်လေးကို ကျန်စစ်သား မင်းကြီးဟာ အလွန် ချစ်ခင် မြတ်နိုး ခဲ့သတဲ့ ။
တစ်နေ့သော အခါ မိဖုရား ဦးဆောက်ပန်း နတ်ရွာ စံလေတော့ မိဖုရား စားရသော ကျွန်ရွာသုံးရွာနှင့် လယ်ပယ်ပစ္စည်း အားလုံးကို သားတော် ရာဇကုမာရ် မင်းသားလေးကို ပေးသနားတော် မူခဲ့သတဲ့။ သားတော် ရာဇကုမာရ် မင်းသားကလေးဟာ ခမည်းတော် မင်းကြီးရဲ့ ကျွေးမွေး ပြုစုခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတို့ကို ပေးဆပ်ဖို့ အတွက် အမြဲတွေးတော နေတတ်သတဲ့ကွယ်။
ကျန်စစ်သား မင်းကြီးဟာ မင်းကျင့်တရား ဆယ်ပါးနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဘုရင်ကြီး တစ်ပါး ဖြစ်တယ်ကွဲ့။ အဲဒါကြောင့် တိုင်းသူ ပြည်သားတွေ အတွက် ဆည်မြောင်းများကို တူးဖောက် ဆည်ဖို့ခြင်း၊ လယ်တော်ပယ် တော်တွေကို ခုတ်ထွင်စေခြင်း၊ ရေတွင်း ရေကန်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ သာသနာရေး အတွက် ဘုရားများတည်၊ ကျောင်းများ ဆောက်လုပ်သတဲ့။
အဲဒီတော့ တိုင်းသူ ပြည်သားတွေရဲ့ ကောင်းကျိုးကို ပြုလုပ်တဲ့ ဘုရင်ကြီးကို အားလုံးက ချစ်မြတ်နိုးကြတာပေါ့ကွယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ ကျန်စစ်သား မင်းကြီးဟာ ပုဂံ ပြည်ကြီးကို အနှစ် (သုံးဆယ်ခန့်) မင်းပြုသတဲ့။ တစ်နေ့မှာတော့ အသက်ကြီး ရင့်လာတဲ့ ကျန်စစ်သား မင်းကြီးဟာ နာမကျန်း ဖြစ်သတဲ့ ကလေးတို့ရယ်။
အဲဒီ အခါမှာ သားတော်လေး ဖြစ်တဲ့ ရာဇကုမာရ် မင်းသားလေးဟာ “ခမည်းတော်၏ ကျေးဇူးကို ဆပ်ဖို့ အခွင့်ရပြီ” ဟု အောက်မေ့ပြီး ရွှေဆင်းတု တစ်ဆူကို သွန်း လုပ်ပြီး ဖခင် ဘုရင်ကြီး ရှေ့တော်သို့ ပင့်ယူ သွားခဲ့သတဲ့။
ဖခင် ဘုရင်ကြီး ရှေ့တော်သို့ ရောက်တဲ့အခါ ရာဇကုမာရ် မင်းသားလေးက “ခမည်းတော်မင်းကြီး၊ ခမည်းတော်၏ ကျေးဇူးကား အတိုင်းမသိ ကြီးမား လှပါပေသည်။ ကျွန်သုံးရွာကို သားတော်အား ခမည်းတော် ပေးသနားခဲ့သော ကျေးဇူးတော်ကို အောက်မေ့ကာ ခမည်းတော် အတွက် ဤရွှေဆင်းတုတော်ကို သွန်းလုပ်၍ လှူပါသည် ဘုရား” ဟု လျှောက်တင်ခဲ့သတဲ့။
ထိုအခါ မင်းကြီးလည်း သားတော်၏ ကျေးဇူး သိတတ်ပုံကို သိရ၍ များစွာ ၀မ်းသာတော် မူပြီး “သားတော် ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ”ဟု ကောင်းချီးပေး၍ သာဓု ခေါ်လေသည်။ ထိုအခါ သားတော်က “ခမည်းတော်မင်းကြီး ခမည်းတော် ပေးသနားသည့် ကျွန်သုံးရွာကိုလည်း ဤရွှေဘုရား လှူပါ၏” ဟု လျှောက်ကာ ဆရာတော်ကြီးများ ရှေ့တွင် ဖခင်ဘုရင်ကြီးက ရေစက်သွန်းချ လှူဒါန်းရန် တောင်းပန်သတဲ့။ ဖခင် ဘုရင်ကြီးက ရေစက်သွန်းချ ပြီးသောအခါ မင်းသားလေးက ဂူဘုရား တစ်ဆူတည်၍ ဤရွှေဆင်းတုကို ဌာပနာ လိုက်သတဲ့။ ကျန်စစ်သား မင်းကြီးလည်း သားတော် ရာဇာကုမာရ် မင်းသားလေး ကျေးဇူး သိတတ်ပုံကို တစိမ့်စိမ့် တွေးရင်း ချမ်းသာ စွာပင် နတ်ရွာစံ သွားရှာသတဲ့။
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲ ကလေး တို့ရယ် . . .။
အဲဒီပုံပြင်လေးမှာ ကလေးတို့ အတုယူစရာ ကတော့ ကိုယ့်ကို ငယ်စဉ်ထဲက ဒုက္ခခံပြီး ကျွေးမွေး ပြုစုခဲ့တဲ့ မိဘတွေ အပေါ်မှာ ကလေးတို့က ကျေးဇူးတရားကို သိတတ်ရမယ်ကွဲ့။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်မိဘ နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ အခါ ကလေးတို့ ပြုစုရမယ်။ သိတတ်ရမယ်။ ဘုရင့် သားတော်လေး ဖြစ်တဲ့ ရာဇကုမာရ် မင်းသားလေး တောင်မှ သူ့ဖခင် ဘုရင်ကြီး နေမကောင်း ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာ ဖခင် ဘ၀ကူးကောင်းအောင် အလှူအတန်း ပြုခိုင်းခဲ့တာကို ကလေးတို့ မှတ်သားနာယူ ကြရမယ်နော်။ ကလေးတို့ကတော့ ငယ်သေးတော့ မိဘ ကျေးဇူး သိတတ်ရင် မိဘ နေမကောင်းတဲ့ အချိန်မှာ နင်းပေး၊ နှိပ်ပေး၊ ဆေးသောက်ဖို့ ရေခပ် ပေးတာလေးတွေ လုပ်ရုံ လောက်နဲ့တင် ရာဇကုမာရ် မင်းသားလေးလိုပဲ ကုသိုလ်ရပြီး လိမ္မာတဲ့သား သမီးလေးတွေ ဖြစ်ကြမှာပေါ့ကွယ်။